एक प्रेमिका प्राप्त गर्न कसरी सोध्न, धेरै मानिसहरू । अधिकांश सूत्रहरू मा छन् खोज को लागि खेद. अनुसार एक तपाईं गर्न सक्छन् कार्यान्वयन गर्न एक प्रेमिका प्राप्त. र यो छ छैन एक भ्रम छ । त्यहाँ निश्चित सिद्धान्त हो, जो बारम्बार सधैं जब, सिक्ने एक नयाँ पत्नी र प्राप्त गर्न एक पछि मिति, तपाईं एक मित्र रूपमा. सक्छ यी को एक भाग को रूप मानव समझ छ । अर्को लाइनहरु तपाईं प्राप्त हुनेछ एक योजना संग अनुक्रमिक कदम लिन कि तपाईं को माध्यम चरणमा महिला, महिला, महिला इश्कबाज र आकर्षित महिला चलाउनु हुनेछ. अधिकांश मानिसहरू, प्रश्न ‘एक प्रेमिका प्राप्त गर्न कसरी’, चाहनुहुन्छ थाहा छ, कस्तो छ स्थिति को महिला-प्रलोभन तपाईं अब सही र के के गर्न ठीक यस स्थिति छ । थप पढ्नुहोस् र अब देखि हेर यो बर्ड गरेको दृष्टिकोण मा संरचना को बेमतलबको जिस्क्याइले छ । दुर्भाग्यवश, छैन सबै. शायद यो जस्तै आवाज एक मजाक छ, तर म यो मतलब एकदम गम्भीर छ । म भेट्न सधैं पुरुष गुनासो गर्ने भनेर तिनीहरूले प्राप्त कुनै प्रेमिका छ । यदि म तपाईं सोध्नु थिए, कसरी धेरै महिलाहरु तपाईं थियो हाल सम्पर्क, म जवाफ प्राप्त: दुई । (मलाई आशा छ कि छैन बहिनी वा आमा अर्थ छ.) कुनै गम्भीर सक्नुहुन्छ कसरी, तपाईं एक प्रेमिका प्राप्त गर्न सक्छन् भने पाउन कुनै महिला । यो छ छैन, दुर्भाग्य हो । तपाईं बस्नु पर्छ जहाँ ठ्याक्कै महिलाहरु तपाईं चाहनुहुन्छ रूपमा प्राप्त गर्न एक प्रेमिका छ । तपाईं मा नर्तकियों. त्यसपछि तपाईं भ्रमण नृत्य वर्ग छ । तपाईं चाहनुहुन्छ दुलहीको एक रक एक मित्र रूपमा, त्यसपछि के तपाईं देख रहे एक रक क्लब । तपाईं चाहनुहुन्छ एक प्रेमिका प्राप्त गर्न सक्छन् जो कुक. त्यसपछि लग मा एक खाना पकाउने पाठ्यक्रम. कम्पनीहरु सजग गतिविधिहरु जहाँ तपाईं बस एक मित्र प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यसपछि लेख पढ्न: ‘तपाईं कसरी प्राप्त बस एक मित्र छ । यहाँ तपाईं प्राप्त हुनेछ थाह धेरै महिलाहरु । हामी कि कायम अधिक एक स्त्रीको सम्पर्क छ, यो सजिलो यो छ एक प्रेमिका प्राप्त गर्न. दुर्भाग्यवश, यो धेरै कठिन हुनेछ, तपाईं नभएसम्म छन् मेगा जानिन्छ बाहिर प्राप्त गर्न एक पर्श, वा कुनै पनि गुण, प्रभाव मा महिला. निस्सन्देह, तपाईं गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि, एक पोशाक छनौट गर्न भनेर देखाउन तपाईं द्वारा नजिक हुन महिला । तैपनि, तपाईं थाह हुनुपर्छ भन्ने मात्र एक धेरै सानो अंश महिला अपिल हुनेछ. यो महिलाहरु को बहुमत सार्न हुनेछ गरेर निष्क्रिय प्रतीक्षा र देख्न, र. तपाईं बनाउन एक बानी छ, हरेक महिला, ठेगाना को एक तपाईं जस्तै.
कि बिना, तपाईं लाग्छ, के म के अपिल पछि आदि. बस अपिल ध्यान छ यहाँ । हेर, यहाँ के तपाईं विचार गर्न आवश्यक छ जब महिला अपिल छ । यो कठिन हुनेछ. महिलाहरु अत्यधिक, परीक्षण समयमा एक कल एक्स-पटक एक मानिस, कि पत्ता लगाउन यो मानिस छ, उपयुक्त साथी वा छैन । यो सामग्री छैन पनि मुख्यतया के तपाईं मा रुचि छन् । महिला बन्द गर्न खोजे को प्रकृति देखि, को मा संचार को व्यक्तित्व को मानिस. धेरै मानिसहरू प्रभावित प्रयास वैज्ञानिक सिद्धान्त, सूत्र, वा एक असल भाषा को महिला । हेर्न कसरी, स्मार्ट, शिक्षित, र बोली, म फर्केर छु । तपाईं पाउन सक्छ मा एक विश्वविद्यालय समयमा एक भाषण गर्ने एक महिला तपाईं प्रभावित गर्न सक्छन्. तर यो महिला कुनै यौन चासो मा, तपाईं तर तपाईं त शायद कार्यहरू तपाईं समाधान गर्न छ. (: प्रभावित महिला द्वारा आफ्नो ज्ञान । तपाईं ल्याउनेछ, आफ्नो घर वा मा पुस्तकालय, र तपाईं आकर्षित संग आफ्नो व्यक्तित्व।) महिला तपाईं परीक्षण समयमा कुराकानी मा आफ्नो आत्म-धारणा, आफ्नो आनन्द लागि जीवन, आफ्नो हास्य, र यति मा । मात्र तपाईं पारित गर्दा यी परीक्षण, तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ आकर्षित महिला । तपाईं यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: बेमतलबको जिस्क्याइले लागि सुझाव मान्छे र पुरुष बढी सफलता संग महिलाहरु, तिमी किन पर्छ कहिलेकाहीं शरारती कुरा गर्न महिला । हामी पकड कि अधिक सकारात्मक व्यक्तित्व विशेषताहरु संग कुराकानी मा एक महिला ल्याउन सक्छ, यो सजिलो यो छ एक प्रेमिका प्राप्त गर्न. जुनसुकै तपाईं के को कुरा गरिरहेका छौं, प्रयास परिचय माथि-उल्लेख गुण छ । निष्कर्ष: क्रम मा एक प्रेमिका प्राप्त गर्न, यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं पूरा महिला, सबै भन्दा राम्रो पुरुष लागि देख रहे. यी महिलाहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक, त्यसपछि, तपाईं संलग्न मा एक कुराकानी । तपाईं गर्न आवश्यक छ छाडा टाइप के आफ्नो मा एक हास्य संग र भावना-चार्ज कुराकानी । म आशा गर्छु म ल्याउन सक्छ तपाईं को तीन आधारभूत सिद्धान्तहरू को बेमतलबको जिस्क्याइले नजिक छ । एक प्रेमिका प्राप्त गर्न कसरी छ, एक कुरा को सही कामको सही क्रम मा.
किन यो छ
तपाईं पनि सिक्न सक्छन् इश्कबाज गर्न. र अन्तमा, मेरो मन्त्र: एक शिल्प छ । कला पोख्त छ यो शिल्प र यो कार्यान्वयन गर्न आफ्नो जीवन । रूपमा सधैं, म स्वागत. के-के सल्लाह हुनेछ, तपाईं दिन कसैले, कसैले भने तपाईं सोध्नु थिए, एक प्रेमिका प्राप्त गर्न कसरी. वा के तपाईं थप टिप्पणी मा यो विषय । त्यसपछि तपाईं टिप्पणी लेख्न. म धेरै कृतज्ञ छु तपाईं को लागि सबै आफ्नो उपयोगी सुझाव, तपाईं समस्या मा सबैभन्दा माइक्रो यहाँ काम सारांशित छन्. यो साँच्चै दुर्लभ छ कि एक पाता, एक पृष्ठ को सम्पूर्ण मुक्त सुझाव विषय मा: म कसरी प्राप्त प्रेमिका उद्धार. मलाई लाग्छ यो ठूलो छ कि तपाईं यहाँ लेख्न र आशा छ कि हामी चाँडै. तपाईंको लेखन शैली छ मलाई प्रभावित, धेरै पनि खुला र इमानदार बाटो रूपमा, तपाईं सामना गर्न आफ्नो. तपाईं कसरी सिक्न हुनेछ तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ आकर्षक महिला आकर्षित गर्न र राख्न चार्ज को पूर्ण मुक्त छ । तपाईंलाई थाहा सिद्धान्तहरू, तपाईं जस्तै एक सामान्य मानिस, एकदम स्वाभाविक आकर्षक महिला. मात्र अब, चार्ज को पूर्ण मुक्त तपाईं को लागि छ । गाइड अधिक आकर्षक छ । आफ्नो डाउनलोड लिंक तुरुन्तै ई-मेल द्वारा. अब अनुरोध छ । ई-मेल** म आफुलाई कडाई गर्न डाटा सुरक्षा । तपाईंको डाटा मात्र हुनेछ बेमतलबको जिस्क्याइले को उद्देश्यको लागि को प्रसारण को लागि डाउनलोड लिंक र पठाउन जानकारी जस्तै लेख, भिडियो पोष्ट, सिफारिसहरू, अडियो सेमिनार, र नै गर्न विषय, प्रलोभन, शरीर भाषा र सञ्चार, महिला संग. हुन निश्चित, यो कुरा मा देखि, तपाईं सुन्न हुनेछ केही बढी मलाई देखि — गारंटी । स्थित छ, को अन्त मा प्रत्येक ई-मेल
← भारत च्याट भावनाहरु - भिडियो डेटिङ डाउनलोड
जर्मन प्रयोग. (इन्टरनेट, युट्युब, भिडियो) →